Dhageysiga Khudbadaha Musharixiinta Madaxtinmo ee Maamulka Hirshabelle oo goordhaw bilaabatay(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Dhageysiga Khudbadaha Musharixiinta Madaxtinmo ee Maamulka Hirshabelle oo goordhaw bilaabatay(Daawo Sawirada)
Waxaa goordhaw xarunta uu kasocdo shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe ka bilaabatay dhageesga Khudbadaha ay Musharxiinta Madaxtinimo ee maamulka Hirshabelle u jeedinayaan Baarlamaanka Maamulkaasi.
Hoolka waxaa ku sugan Masuuliyiin katirsan Dowlada Federaalka Soomaaliya, Gudoonka Baarlamaanka Maamulka Hirshabelle, Musharixiita u taagan Doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle iyo marti sharaf kala duwan.
Doorashada Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle waxaa u tartamaya Sadex Musharax oo kala ah Maxamed Cabdi Waare ,Cali Cabdulaahi Cosoble iyo Cali Maxamed Carraale , kuwaa oo bilaabay in ay hada jeediyaan Khudbadaha waxqabadkooda hadii loo doorto Hogaanka Maamulka Hirshabelle.
Waxaa sidoo kale Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Hirshabelle u sharaxan labo Musharax oo kala ah Gudoomiyihii gobolka Shabeelaha Dhaxe Cali Guudlaawe iyo Musharax Cali Xasan Taakow, waxaana la filayaa musharixiintan in iyana jeediyaan khudbado ku aadan waxqabadkooda.
Madaxweynaha oo u hambalyeeyey madaxda cusub ee maamulka Hirshabeelle
Guddiga Doorashooyinka oo Goordhaw War kasoo saaray Doorashadii Aqalka sare ee Galmudug Fariina u diray..